Accueil > Newsletters > Filazam-baovao faha-104
« Newsletter n° 102 [ENG]
Newsletter n° 104 »
publié par Admin 2, le mardi 18 septembre 2018
HYDELEC no anarana entin’ny orinasa TOZZI GREEN, sampan’ny vondron’orinasa italiana Tozzi Renewable Energy, ao anatin’ny sehatra famokarana herinaratra avy amin’ny rano. TOZZI GREEN moa dia orinasa nanjary nalaza teto Madagasikara hatramin’ny taona 2010 noho ny nandroahana ireo fokonolona tany amin’ny faritra Ihorombe avy tao amin’ny taniny ho an’ny tetikasan’ity orinasa ity momba ny famokarana angovo avy amin’ny zava-maniry sy ny fikasàny hamboly valavelona (jatropha) teo amin’ny velarantany mihoatry ny 6 600 hekitara (1) . Ny tsy fahombiazan’ny fambolena valavelona dia nitarika ny orinasa hitodika amin’ny famokarana voly hafa, indrindra fa ny katsaka, eo amin’ny velarantany kely kokoa (2).
Amin’izao fotoana izao i HYDELEC / TOZZI GREEN dia manomana ny fananganana tohodrano hamokarana herin’aratra, araky ny nifanarahany tamin’ny mpitondra ny Fanjakana Malagasy. Ny fanamboarana izany dia
hahasafotry ny rano ny tanimbary sy saha fambolena katsaka, saonjo, ovy,
hanapotika fitaovam-pamokarana, ny antom-pivelomana ary ny fonenan’ny mponina,
hanery ny fianakaviana an’arivony any amin’ny faritr’i Vakinankaratra sy Amoron’i Mania hifindra monina (3).
Tandidomin-doza noho ny voka-dratsin’ny fanamboarana io tohodrano io ny mponina ao amin’ny fokontany dimy : ny ao Farihitsara sy Ampamehana, ao amin’ny kaominina Sahanivotry Manandona, ny fokontany Avarabohitra ao amin’ny kaominina Ambohitsimanova, anatin’ny Distrikan’Antsirabe faharoa, ary fokontany Tatabe sy Bemasoandro ao amin’ny kaominina Tsarazaza anatin’ny Distrikan’i Fandriana.
Tapa-kevitra ny hiaro ny taniny, ny toeram-ponenany sy ny toeram-piasany, ny trano efa azony nandritra ny taona maro sy ireo toerana izay miorina amin’ny fasan’ny razany, ireo vondrom-piarahamonina ao an-toerana, ny 98% amin’izy ireo dia miaina avy amin’ny fambolena sy fiompiana, manohitra mafy ny fanatanterahana ity tetikasa tena manimba zavatra betsaka ity. Niara-nanao hetsika izy ireo ny Alakamisy faha-29 Aogositra ka nanasa ny fampitam-baovao mba hampahafantatra sy hampita ny fitakian’izy ireo ny hanafoanana ny fikasàna hanamboatra tohodrano (4).
Ireo mponina ao amin’ny 5 fokontany, tapa-kevitra mafy ny handà ity tetikasa ity, dia tohanan’ireo mpitarika ny fiangonana misy ao amin’ny faritra tandindomin-doza, sy ny fikambanana avy amin’ny firaisamonim-pirenena avy any an-drenivohitra izay mifanome tànana mba
hanamafy orina ny fahafahan’ny fokonolona hitarika ny tolona ataony.
Ny FikambananaTANY dia mandrisika ny fokonolona sy ireo fikambanana mifanohana aminy, amin’ny fanapahan-keviny hiara-hiasa amin’ny fiarovana ny tany ho toeram-pambolen’ireo fianakaviana tantsaha. Ary manao antso avo amin’ny mpiaro ny zon’olombelona ary ireo mpandala ny rariny sy hitsiny eran-tany mba haneho ny firaisan-kinany amin’ny fitakiana ny fanafoanana io tetikasa fanamboarana tohodrano kasaina hamokarana herin’aratra io.
Parisy faha-17 Septembra 2018
Ny Fikambanana TANY miaro ny Tany Malagasy - Le Collectif pour la Défense des Terres Malgaches – TANY
Rakitra nanovoza-kevitra :
(1)	http://terresmalgaches.info/IMG/pdf..., pages 28-48
(4)	Videoreportage sur la manifestation : http://www.gasykamanja.com/v2/video... : de la minute 12.30 à 25.30